Apple ịkwụ ụgwọ ga-amalite na Israel na Mee 5 | Esi m mac
Apple Pay ga-amalite na Israel na Mee 5
O mechara yie ka a kwadoro mba ọzọ ndị ọrụ ya ga-enwe ohere iji Apple Pay site na iPhone, iPad na iPod touch ga-abụ Israel. N’izu gara aga, anyị bipụtara otu isiokwu nke anyị gwara gị banyere ohere nke ịmalite ị nweta teknụzụ ịkwụ ụgwọ a na Israel.
Asịrị a Haaretz kwadoro ya, ọrụ nkwụnyeghị kọntaktị nke gosipụtara na na May 5, ndị ọrụ nke ngwaọrụ dakọtara na Apple Pay ga-enwe ike ịmalite itinye mgbakwunye kredit ha na debit na ngwa Wallet.
The iPhone ahịa òkè na Israel n'etiti 20 na 30%Ya mere, iwebata Apple Pay na mba a agaghị anọchite anya mgbanwe ọ bụla dị mkpa na mpaghara ugbu a. Ọrụ ndị Apple na-edebe maka azụmahịa ọ bụla ndị ọrụ mere dịgasị iche na ụlọ akụ, mana nkezi bụ 0,05%.
N'adịghị ka igba egbe na mba ndị ọzọ, Apple Pay ga-adaba na ọtụtụ ụlọ akụ na ụlọ akụ na mba, n'ụzọ dị otú a, Apple ana achi achi na ọtụtụ n'ime ya ọrụ nwere ohere nke iji ya na na ọ na-aghọ họọrọ ugwo nhọrọ.
Akụkọ mbụ metụtara mmalite nke Apple Pay na Israel malitere site na ọgwụgwụ nke afọ gara aga. Ihe kpatara kpatara mbubata ahụ bụ n'ihi na ọtụtụ bụ ụlọ ọrụ achụmnta ego na-abụghị maka ọrụ iwebata teknụzụ a na azụmaahịa ha, echiche nke dabara nke ọma agbanweela.
Apple Pay dị n’ihe karịrị mba iri atọAgbanyeghị, n'oge a anyị amaghị ma atụmatụ mmeba a ga-agbasa ọnụ ọgụgụ a site n'ịgbakwunye mba ndị na-asụ Spanish, ebe anyị na-ahụ naanị Mexico na Spain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple Pay ga-amalite na Israel na Mee 5
N'akụkụ nke mbụ nke usoro anwụnta Mosquito, Apple na-ebipụta ọhụụ pụrụ iche
Ndị ahịa ọhụrụ na-abata na Apple nwere Macs na iPads